China Galvanized Square Steel Pipe For Steel Structure fekitori nevagadziri |Zhanzhi
Galvanized Square Steel Pipe YeSimbi Maumbirwo
Galvanized square pombi inokungurutswa negalvanized steel stripmushure mekurapa kwehunyanzvi.Kazhinji, tambo yerata inotakurwa, yoiswa pamwero, yopetwa uye yoiswa weld kuti iite chubhu yeraundi, yozokungurutswa kuita sikweya chubhu yozochekwa pakureba kunodiwa.
1.Grade: A106, A53, zvichingodaro.
2.Size: 19 * 19mm - 500 * 500mm, maererano nezvinodiwa nemutengi
3.Kurapa kwepamusoro: galvanized
4.Length: 2m-5.8m/6m/12m (Tinogona kugadzirisa urefu maererano nechikumbiro chako)
5.Packing: yakajairika gungwa-yakakodzera kurongedza
6.Service: kurova, kupenda, kucheka, welding, nezvimwewo.
Galvanized square simbi machubhu ane akanakisa akazara mechanicha zvivakwa, yakagadzikana kuita uye yakanakisa mhando.Chikonzero chikuru chekushandiswa kwakakura kwegorofu rectangular pombi ndechekuti inogona kuridza mabhenefiti akawanda mukushandisa maitiro uye kusangana nezvinodiwa zvemamwe maindasitiri.Inogona kuratidza kuramba kwecorrosion zvirinani kana mhando yesevhisi yakagadzikana, saka usazvinetse nezve njodzi yemhando.
Square machubhu anorongedzerwa zvichienderana neawo machinjiro zvikamu:
(1) masikweya machubhu ari nyore—machubhu masikweya uye rectangular furemu masikweya chubhu;
(2) masikweya chubhu akaomarara—machubhu akaenzana nemaruva, machubhu ane muromo wakashama, makora eskweya machubhu uye machubhu ane chimiro chakasarudzika.Kuiswa kwesimbi kwepamusoro kurapwa kwema galvanized square machubhu: zvinoenderana nesimbi yepasi kurapwa, masikweya machubhu akakamurwa kuita inopisa-dip galvanized square chubhu, phosphatized square machubhu, oiled square chubhu uye pickling passivated square chubhu.
Kurongeka kwekushandiswa kukuru kwegalvanized square tubes:Machubhu esquare akaiswa maererano neanonyanya kushandiswa-square chubhu yekushongedza uye dhizaini, michina yekugadzira, maindasitiri giredhi square machubhu emishini yemechani, machubhu masikweya emiti yemakemikari, zvimiro zvesimbi furemu, masikweya machubhu eindasitiri yekuvaka ngarava, sikweya machubhu ezvitrolley uye sikweya. machubhu embiru dzesimbi nematanda.
Kupatsanurwa kwemadziro makubvu emagalvanized rectangular chubhu:machubhu ane rectangular anokamurwa zvinoenderana nemadziro ukobvu-akanyanya-mutete-akakomberedzwa nerectangular chubhu, matete-madziro ane rectangular machubhu uye makobvu-akavakirwa rectangular chubhu.
Galvanized square simbi mapaipi anonyanya kushandiswa mukuvhara madziro, dhizaini, kugadzira michina, mapurojekiti ekuvaka simbi, kuvaka ngarava, solar power generation support, simbi chimiro engineering, power plant, zvekurima nemakemikari muchina, girazi keteni madziro, mota chassis, airport, etc.
*Tinogona kupa masevhisi ekupa zvakananga kune zvigadzirwa zvakapedzwa
*Isu tinokwanisa kuita chibvumirano chekuunza kunze kwenyika
*Iva nemukurumbira wakanaka